57% yevaAmerican vaizobhadhara kukwira kumusoro muOCVID-19 yekudzivirira mutsara
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » 57% yevaAmerican vaizobhadhara kukwira kumusoro muOCVID-19 yekudzivirira mutsara
Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
35% yevaAmerican vanonzwa hasha kune avo vakabaiwa jekiseni pamberi pavo
Vazhinji vekuAmerican vari kutarisira yavo yakamirirwa kwenguva refu kuti vatore mushonga
Chido cheveruzhinji che COVID-19 kupfura chiri kuburitsa manzwiro anopokana
Vanhu vakashungurudzika kuti vepamusoro-soro vekuAmerican uye vane mukurumbira vakakwanisa kuseta sisitimu yekuwana jekiseni pamberi pevamwe
Sezvo majekiseni eCOVID-19 achiramba achibuda munyika, maAmerican mazhinji ari kutarisira nguva yavo yakamirirwa kwenguva refu kuti vawane mushonga. Mushure megore rekugara mudenda, ruzhinji rwevanhu chishuwo cheCOVID-19 kupfura chiri kuburitsa manzwiro anopesana.
Ongororo ichangobva kuitwa yevatengi vanopfuura chiuru vakawana vamwe vachishushikana kuti maAmerican ane mukurumbira uye vanhu vakakurumbira vakakwanisa kusona sisitimu yekuwana jekiseni pamberi pevamwe, nepo vamwe vekuAmerican vachibvuma kuti vaizobhadhara kuti vatamisirwe mumutsetse wekudzivirira.
Kunyange vazhinji vekuAmerican vasingafunge kuti vanhu vanofanirwa kubhadhara kuti vatore mushonga we COVID-19 pakutanga pane zvakajairwa, 57% vanobvuma kuti vangabhadhara kuti vakwire mumutsetse.
Vanopfuura gumi muzana vaizoburitsa madhora mazana mashanu kana kudarika kuchengetedza nzvimbo.
27% yevaAmerican vaizosiya doro kwegore kana zvaireva kuti vaigona kuzowana mushonga weCOVID-19 mangwana.
Vamwe vangasiya zvakare Netflix (23%), mitambo yemavhidhiyo (22%), uye vachiona mitambo (22%). Vatengi vaive vasingade kwazvo kuzvipira kuteerera mimhanzi (10%), bonde (14%), kutenga (15%), uye zvinodhaka zvinodhaka (16%).
Vanopfuura chikamu chechina (26%) vanoti vatora pabasa rechipiri kuti vakwanise kubatira jekiseni re COVID-19 pakutanga pane zvavaizowana. Yekuwedzera 18% ichafunga kudaro.
Saizvozvowo, 60% vanofunga kuti hazvina kunaka kana vanhu vakakurumbira nevamwe vanhu vane mbiri yepamusoro vakwanisa kubayiwa jekiseni pamberi pavo.
35% yevaAmerican vakanzwa godo kana kutsamwira vanhu muhupenyu hwavo vakabaiwa jekiseni pamberi pavo. Gen Xers (50%) uye zviuru zvemazana (46%) vanonzwa godo kupfuura chero chimwe chizvarwa.
US NAVY: Mvura Inonwa muHawaii kuti ive muchetura ...
Basa riri kure remudzidzi muna 2022
Wizz Air, Frontier, Volaris, JetSmart vanoda iyo Airbus...
Humbowo hwekudzivirira ikozvino hunosungirwa kukwira VIA Rail ...
Indasitiri yekufambisa inozosangana zvakare kuWTM London
Mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika, VaCyril Ramaphosa, pamusoro pekufambira mberi mukuyedza kurwisa denda reCOVID-19.